Na na 2.87 nde ngwa dị na gam akporo Play Store na ihe karịrị 1.96 nde ngwa dị na iOS App Store, anyị agaghị ekwubiga okwu ókè ma ọ bụrụ na anyị kwuru na ahịa ngwa ahụ na-arịwanye elu. N'ụzọ ezi uche dị, ngwa gị anaghị asọmpi na ngwa ọzọ site na onye na-asọmpi gị na otu niche mana yana ngwa sitere n'ofe ahịa na niches.
Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe kpatara njikarịcha nke ngwa na-apụghị izere ezere. Yiri njikarịcha njin ọchụchọ, ebe atumatu, ngwaọrụ, usoro, na usoro iji tinye websaịtị ma ọ bụ webpage pụtara na ibe mbụ nke nsonaazụ ọchụchọ, Ngwa ụlọ ahịa ngwa (ASO) na-eme ka ngwa putara n’elu nsonaazụ ọchụchọ na ụlọ ahịa ngwa.
Iji nyere gị aka imeta ihe ndị a, anyị bịara iji njikarịcha ngwa ahịa ngwa ngwa edepụtara edepụtara, uru ya na 10 ga-enwerịrị ngwaọrụ. Yabụ, ọ bụrụ na ị bụ onye nrụpụta ngwa, ụlọ ọrụ mmepe ngwa ma ọ bụ ụlọ ọrụ ASO, ihe a ga-ede ga-eme ka anyị mata ụfọdụ ngwa njikarịcha ngwa ngwa.
Akụkụ kachasị mma banyere App Annie bụ na ọ naghị enye ndenye aha ma ọ bụ ụdị ọnụahịa. Ọrụ nweta ahaziri ruturu dabeere na mkpa ha.
Otu n'ime ngwaọrụ nyocha kachasị mma, Ụlọ Sensọ na-enye gị nghọta maka ụfọdụ mkpụrụokwu ndị asọmpi gị na-eji mana ị na-efu efu. Ọ na - enyere gị aka tọghata iyi egwu dị ka ohere ma kụọ ọnụnọ ngwa gị n'ịntanetị na ụlọ ahịa.
Ezubere maka nnukwu ahụmịhe, ndị Ngwa tweak awade ọtụtụ akụkọ na localization atụmatụ. Site na mkpesa a gwọchara site na mba 60 gafee usoro dị iche iche na-akpali akpali, nke a bụ ngwa ngwa ngwa ahịa. Agbanyeghị, ngwa ahụ dị maka naanị ndị ọrụ iOS.
Site na ngwa ahụ, ịnwere ike ịgbaso ụfọdụ usoro arụmọrụ dị mkpa dịka mgbanwe ọnọdụ ọnọdụ isiokwu, ọnụego mgbanwe, nbudata ma lelee usoro njikarịcha ngwa nke ndị asọmpi gị iji gbanwee nke gị. I nwekwara ike ịchọta ngwa gị site na iji atụmatụ ntụgharị asụsụ nke akụrụngwa na-enye.
Ntinye Ezubere iji dozie ọdịiche dị n'etiti njikọta ngwa na nghọta njirimara onye ọrụ. Ewubere ya na echiche ntọala na ndị mmepe ngwa na ụlọ ọrụ anaghị enweta ezigbo ohere nzaghachi onye ọrụ yana usoro njikọ aka iji bulie ngwa ha maka arụmọrụ na ọhụhụ. Apptentive bụ ebe a iji weta ihe niile ọnụ.
ASOdesk na-enye gị nghọta zuru ezu banyere ajụjụ ndị ọrụ gị na ndị na-ege gị ntị na-eji iji nweta ngwa ndị yiri nke gị n'ahịa. E wezụga nke ahụ, ọ na-agwakwa gị isiokwu ndị ngwa ngwa nke ndị na-asọ mpi na-agbago maka yana ozi ndị ọzọ gbasara isiokwu asọmpi dị ala. N'ikpeazụ, ngwa ahụ na-enyekwa gị ozi dị oke egwu banyere arụmọrụ nke usoro ASO gị.
Iwu Scratchpad: Ihe Ntanetị Chrome a na-enye Fastzọ kachasị ọsọ iji nweta ma melite Salesforce Site na App Web ọ bụla